100 shabeel ayaa ku hartay Sundarbans delta | Cusbooneysiinta Cagaaran
Kaliya 100 shabeel ayaa ku hartay saxanka Sundarbans delta mangrove
Tirada shabeelka mangrove ee ku yaal Sundarbans way ka yar tahay sidii markii hore la aaminsanaa Sida laga soo xigtay ilo wareedyo rasmi ah, tirakoob ka dib kaamirooyinka ku qarsoon geedaha ayaa loo isticmaali jiray in lagu tiriyo.
Kaliya ilaa 100 shabeel ayaa ku sii haray huurka mangrove-ka oo ku yaal wabiga Sundarbans, oo ka fog tirada ugu dhow ee markii horaba la tiriyey. Qiyaastii 440 shabeel ayaa laga diiwaan geliyey tirakoobyadii hore ee sanadkii 2004 lagana sameeyey Sundarbans, oo ah keymaha ugu weyn mangrove-ka adduunka waana midka kaliya ee ay ku nooshahay bisadahaan waaweyn.
Khubarada ayaa leh hab ka wanaagsan ayaa sabab u ahaa hoos u dhaca lama filaanka ah ee tiradooda, iyo inay yiraahdaan kaamirooyinka qarsoon ee waqtigan la adeegsaday waxay si fiican u saxeen tirada shabeellada laga helay gobolkan Hindiya.
Tapan Kumar Dey, oo ah ilaaliyaha dowladda ee ilaaliyaha duurjoogta, ayaa sheegay in falanqaynta kamaradda ee sanadka oo dhammaatay bishii Abriil ee sannadkan laga helay lambarro shabeel ah oo la heli karo. inta udhaxeysa 83 iyo 130, taas oo celcelis ahaan siinaysa 106.
Shabeellada Bengal ku nool inta badan Hindiya, meeye wadanka oo dhan waxaa jira tiro ka mid ah 2.226, oo leh dad yar oo ku nool Bangladesh, Nepal, Bhutan, China, iyo Myanmar.
Monirul Khan, oo ah borofisar ku takhasusay cilmiga xoolaha ee jaamacadda Jahngirnagar ee dalka Bangladesh isla markaana ah khabiir ku takhasusay noocyada bisadaha ee heer qaran ayaa yidhi daraasada ayaa xaqiijisay cabsidiisii ​​ugu xumeyd.
Khan ayaa ku adkeysanaya taas dowladdu waa inay wax badan ka qabataa ilaalinta xayawaanadan, Kuwaasoo arkaya inay tiradoodu yaraatay sababo la xiriira ugaarsiga sharci darrada ah iyo horumarka degdegga ah ee ka socda xadka keymaha.
Hay’ada Duurjoogta ayaa leh shabeelku waxay halis weyn ugu jiraan dabar goynta adduunka. Tiradooda ayaa hoos uga dhacday 100.000 sanadkii 1900 ilaa 3.200 hadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » General » Noticias » Kaliya 100 shabeel ayaa ku hartay saxanka Sundarbans delta mangrove